Knutson Alwaax Alwaax gubanaya Godka Dabka
Kuma jiraan: Waxyaabaha Daboolida shabaggeedii karinta ee la hagaajin karo, solayda ayaa wareegaysa 360 daraf Dibedda ah oo leh mesh sida miis dhinaceeda ah Lug culus oo lugta lagu dhisayo Faahfaahinta Nooca Waxsoosaarka Nooca: Godka Dabka Waxyaabaha Dibedda: Nadiifinta Birta ah ee Loo Adeegsan Karo Saqafka looxa ah: Laguma saari karo alwaax Nooca Shidaalka Deck: Daryeelka Waxsoosaarka Gubashada 1. Marka uu dabku dhammaado, dhuxusha waa qabow, godka dabka ee dibadduna waa la qaboojiyaa si uu u taabto, uga saaro dambaska uguna habboon u tuuro. 2. Ku keydi meel ku dhow carruurta iyo xayawaanka guriga. Bal eeg ...
Qaybo ka sameysan warqad khaas ah oo ka sameysan warshad xirfadeed.
Qalabka birta ah ee saxda ah ee saxda ah ee adeegga birta birta ah / adeegga goynta laser
OEM / ODM Sheet Birta Daabacaadda / sheet sax sax sheet / Adeeg Jarida laser
Qaab-dhismeedka Qaab-dhismeedka Qaab-dhismeedka Qaab-dhismeedka Birta ee Adeegga CNC
Habee Laabista Birta iyo Qalabka Laser Jarida Laser Qalabka Beenta Birta
Derbyshire steel Wood gubanaya godka dabka
Ku billow dubista marshmallows, eeyaha kulul, ama uun ku raaxeyso dabkan dabka xaabada ka gubanaya! Waxaa laga farsameeyay birta, waxay soo bandhigeysaa dhammaystir madow oo diida heerkulka sare. Cabbiraadda 36 ”W, dabkan dabka is haysta wuxuu ka kooban yahay dhinacyo mesh leh dusha sare ee shaashadda qurxinta, waxaana loo aasaasay lugaha xagasha sare ee taabashada casriga ah. Dusha sare, shaashad dhimbiil ayaa ka hortageysa qarxinta jidka ka baxsata inay baxsato. Turub ka mid ah ayaa kaa caawinaya inaad dabka si fudud ku kiciso, daboolka keydkuna wuxuu ilaaliyaa marka aan la isticmaalin. Waa maxay ...
Aragti Weyn Qaybo culus oo bir ah oo alxamid ah oo been abuur ah ka sameysan shirkado been abuur ah